कलंकीबाट पक्राउ परेका यी दुई युवती जसले पुरुष देख्ने बित्तिकै यस्तो हर्कत गर्थे ! – List Khabar
Home / समाचार / कलंकीबाट पक्राउ परेका यी दुई युवती जसले पुरुष देख्ने बित्तिकै यस्तो हर्कत गर्थे !
कलंकीबाट पक्राउ परेका यी दुई युवती जसले पुरुष देख्ने बित्तिकै यस्तो हर्कत गर्थे !
admin December 11, 2021 समाचार Leaveacomment 112 Views
काठमाडौं उपत्यकामा ठगी, लुटपाट तथा पकेटमा’रीमा संलग्न महिलोको गिरोह पक्राउ परेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका १४ कलंकीबाट दुई जना महिला पाकेटमा’र पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ, गोंगबु ११ की २४ वर्षीया सम्झना परियार र सिन्धुपाल्चोक लिसंखु घर भई हाल काठमाडौँ मनमैजु बस्ने २३ वर्षीया सिर्जना उप्रेती रहेका छन् ।
उनीहर पेशेवर रुपमै ठगी तथा पकेटमा’रीमा संलग्न रहेको प्रहरीेले जनाएको छ । पुरुषहरुसँग नजिकिने र उनीहरुले पाकेट मा’र्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। केहीलाई उनीहरुले ठगी समेत गरेका थिए
Previous हाकिमले महिला कर्मचारीलाई यस्तोसम्म गरे, कर्मचारीले लगाइदिइन् १४ करोडको चुना
Next ह्वात्तै बढ्यो इसीडी, विद्या’लय कर्मचारी र लेखापालको तलब भत्ता ! कति पुग्यो ?